Fitaovana fanodinam-bidy mora vidy sy mpamatsy | Ouzhan
Ny "totohondry mena" dia dingana fandroahana mafana tokoa. Ny fantsom-boaloboka mena manify vy dia mila mampiasa karibida simenitra mifamatotra vy. Ny hamafin'ny karbaona simenitra mifamatotra vy dia ambany noho ny karbaôida simenitra, ary ny hamafin'ny vokany dia tsara kokoa noho ny karbaonida simenitra. Ankoatr'izay, ny karibida vita amin'ny simenitra vita amin'ny vy dia azo ampiasaina amin'ny milina aloha ary avy eo dia maty.
Fantsom-bokotra mena vy mangatsiaka miovaova-miendrika vy mametaka faritra sy faritra
Ny karbida vita amin'ny simenitra vita amin'ny vy dia tsy vitan'ny hoe manana tanjaka avo, henjana, fa azo zahana ihany koa amin'ny alàlan'ny fanodinana milina sy fanodinana hafanana, ary manana hamafin'ny karbida simenitra (aorian'ny famonoana sy famonoana, dia mety hahatratra (68 ～ 73) HRC, avo mitazona fanoherana Noho izany, tena mety amin'ny famokarana bobongolo isan-karazany izy io. Saingy, satria lafo ny karbaonida simenitra sy karbaona vita amin'ny simenitra vy ary tsy dia henjana, dia mety ny mampiasa inserts hiseho amin'ny bobongolo mba hampitomboana ny ain'ny serivisy amin'ny bobongolo ary tehirizo ny fihenan'ny fitaovana sy ny vidiny. Noho ny toetra mampiavaka ny vy tsy misy fangarony, mpanjifa maro no zatra mampiasa vy tsy misy fangarony hanaovana ampahany, ary miharihary ny tombony.
Tombontsoa amin'ny vy vita amin'ny vy vy Ouzhan voahidy vy
- Ny fiarovana ny maintso sy ny tontolo iainana, ny vy vy dia afaka averina averina 100%, tsy hiteraka fandotoana ny tontolo iainana, ary mahomby amin'ny fampandrosoana maharitra; Ny fako vy tsy misy fangarony koa dia manana lanja ara-toekarena lehibe.
- Toetran'ny simika: ny fanoherana simika sy ny fanoherana ny harafesin'ny elektrokimika no tsara indrindra amin'ny vy, faharoa amin'ny alitara titanium ihany.
- Toetra ara-batana: fanoherana ny hafanana, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny hafanana ambany ary fanoherana ny hafanana avo lenta aza.
- Toetra mekanika: arakaraka ny karazany vy tsy misy fangarony, tsy mitovy ny toetra mekanika. Ny vy vy martensitika dia manana tanjaka sy hasiam-batana avo lenta, ary mety amin'ny famokarana faritra tsy mahazaka harafesina izay mitaky tanjaka avo sy fanoherana mitafy ambony, toy ny porofom-pirinty turbine sy vy vy. Antsy, vy tsy misy fangarony, sns., Ny vy vy austenitika dia manana plastika tsara, tsy matanjaka fa ny fanoherana ny harafesina tsara indrindra eo amin'ireo vy vy. Izy io dia mety amin'ny fotoana izay mitaky fanoherana ny harafesina fa ambany ny toetra mekanika, toy ny zavamaniry simika sy zavamaniry zezika. Ireo fitaovan'ny, asidra solifara, mpanamboatra asidra hydrochloric, sns., Mazava ho azy, dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny tafika toy ny sambo anaty rano. Ny vy vy tsy misy fangarony dia manana toetra mekanika antonony sy tanjaka ambany, saingy mahatohitra ny fitrandrahana azy ary mety amin'ny faritra lafaoro indostrialy isan-karazany.
- Fampisehoana dingana: ny vy austenitika dia manana ny fahombiazan'ny dingana tsara indrindra. Noho ny plastika tsara ananany dia azo zahana amin'ny takelaka maro, fantsona ary profil hafa izy, mety amin'ny fanodinana tsindry. Ny vy vy martensitika dia manana fahombiazan'ny fizotran'ny asa noho ny hamafiny.
- Ny bikan'ny forging mena amin'ny ankapobeny dia tsy voafetran'ny endrika ivelany amin'ny ampahany amin'ny vokatra.
OEM namboarina manokana vy fanompoana-China Shanghai Forging faritra vy vy faritra mpanamboatra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manodina vy tsy misy fangarony izy io miaraka amin'ny faritra milamina avo lenta sy azo antoka. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana sy ny fiasan-dàlana mahomby dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny vy vy fisakanana. Ho fanampin'izany, ireo vokatra forging vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny faritra mangatsiaka mifaninana amin'ny cnc ho an'ny mpanjifantsika mendrika izahay.
Fampiharana ny vy vy vy nohomboana forging faritra
Ho an'ny faritra vy tsy misy fangarony izay mila famokarana be dia be, ny fametahana totofana mena dia ampiasaina hamokarana betsaka, hitsimbinana ny tsingerin'ny famokarana ary ny vidiny.
Inona avy ny fampiasana vy vy tsy misy vy
304 vy vy vy ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana fitaovana sy fitaovana isan'andro, fa amin'ny indostria henjana manimba na rivotra iainana an-dranomasina, tsara kokoa ny mampiasa vy 316.
Ho an'ny faritra kely misy takiana ambonimbony kokoa dia azo ampiasaina amin'ny famokarana betsaka ny forona totohondry mena, izay mety amin'ny fitaovana mekanika sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro misy ampahany kely kokoa.
Tombony amin'ny serivisy fanodinana vy
- Ny vokatra marina rehetra amin'ny forging faritra dia tsy maintsy jerena amin'ny kalitao hentitra.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ny vy vy vy.
Previous: Namboarina vy vy sandoka namboarina
Manaraka: Namboarina manokana vy vy sandoka faritra mekanika